Best Of The Best - exolaerimaknae - Wattpad
Chan . . .
28.9K 4.3K 16
သူတို့သိပ်ချစ်တတ်ခဲ့တယ် . . . . . . .
32.9K 4.9K 51
You had me always in your closed Bible.
15.5K 1.7K 16
5.5K 621 7
သီချင်းတွေမှာ ပုံပြင်ကိုယ်စီရှိကြတယ် ဒါကို ကိုယ်မပြောလည်း မင်းသိပါတယ်
18.1K 2.3K 14
ဒီဘက် ကမ္ဘာမှာတော့ ခင်ဗျားက သူမကို ချစ်ပါ။ ခင်ဗျားကို ကျွန်တော်က ချစ်ပေးမယ်။ ဒီလောက်ဆို လုံလောက်ပါတယ်။
1.7M 154K 72
B×B(Own Characters) Romance,Drama and other age limited feelings ဒီ​လောကထဲကမတည်​မြဲခြင်းတရား​တွေထဲ မင်းကို​​တော့ဖြင့်​ ထဝရအရှုံး​ပေးထားချင်​မိတယ်​
The Myth Of Rain Drops
"သူတို့နှစ်​ဦးလက်​ထပ်​ပွဲကို ကျွန်​​တော်​လာခဲ့ပါဦးမယ်...." #OhSehun ၁၉၆၂ခုနှစ်​မှ ဝတ္ထုရှည်​၏နှစ်​သက်​မိ​သောဇာတ်​လမ်း​ကျောရိုး​နောက်​ခံ ​လေးနက်​သိမ်​​မွေ့​သော စကားလုံးများအားနှစ်​ခြိုက်​​လေးစားမိ​သော​ကြောင့်​ ကိုးကား​ရေးသားသည်​။ (မိုးညအိပ်​မက်​မြူ) Version ​ပြောင်း​၍​ရေးသားခြင်းဖြစ်​​သော​ကြောင့်​ အမှားအယွင်းတစံ...
အစ်ကိုလေး သို့မဟုတ် ကျွန်တော်ချစ်ရသူ
333K 29.9K 31
My first time BL Fiction ❤️and I come back with them (Akihiko x Nao)
ပန်းမဟုတ်သော ပန်းတစ်ပွင့်အကြောင်း ( Completed )
90.7K 9.3K 18
Written By ~Jinn Jar
12.8K 1.6K 4
91.6K 8.3K 22
ပေးဆပ်ခြင်းဆိုတဲ့ အရာကို ငါက ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ကိုင်ထားတုန်းမှာ မင်းကတော့ ရယူခြင်းရဲ့ ဝေးရာကို ဆက်တိုက်သွားနေခဲ့တယ်... ဒါ့ကြောင့် ထင်ပါရဲ့.. တို့နှစ်ယောက် မဆုံနိုင်ခဲ့တာ..
35.4K 3.4K 6
242K 24K 32
Luhan : "sehun...မင်းအပေါ်ထားတဲ့ငါ့ရဲ့အချစ်တွေကRomeoထက်ကိုအများကြီးသာတယ်..မင်းပတွက်ဆိုအသက်ကိုတောင်စွန့်လွှတ်ပေးနိုင်သလို..ဘ၀ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့လည်းငါလဲနိုင်တယ်...မင်းကငါ့အတွက်အရာအားလုံးပါ...." Sehun : "မင်းငါ့အတွက်အသက်စွန့်ပေးစရာမလိုဘူးLuhan... မင်းငါ့အတွက်အသက်စွန့်ပေးစရာမလိုသလို...Romeo လည်သဖြစ်ပေးစရာမလိုဘူး..ငါကသာမင်းအတွ...
12.9K 1.4K 15
Xiuhan Otp Romance သူက ကျွန်‌‌တော်‌ ‌ပြောပြတဲ့ ပုံပြင်‌ထဲက စကား‌လေးတစ်‌ခွန်းကို လိုက်‌လိုက်‌‌ပြော‌လေ့ရှိတယ်‌ 'For you, thouand times over'
My Adorable Foolish Gangster||completed||
119K 9.8K 23
Main:sekai Pure affection between two bounty hunter
ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခု၏ နောက်ကွယ် [Behind The Scene]
88.5K 8.7K 30
"မဟုတ်​ဘူး...Baekhyun လုံးဝ မ​သေဘူး...သူ ကျွန်​​တော့်​အနားမှာ အမြဲတမ်းရှိတယ်​..." -Chanyeol "​ကျေးဇူးပြုပြီး Baekhyun ဆိုတဲ့ အရိပ်​မည်းကြီး​အောက်​က​နေ ရုန်းထွက်​ပါ​တော့ Chanyeolရယ်​..." -Sehun "ဒါ​တွေအားလုံး မင်း​ကြောင့်​ဖြစ်​ရတာ Sehun... မင်းကို ငါ သတ်​မယ်​..." -Baekhyun
163K 15.1K 30
မြင်တွေ့ခွင့်တော့ ရှိပြီး .. မနီးစပ်နိုင်တဲ့ အဲ့ဒီ ကြယ်ပွင့်တွေလို ... သူဟာလည်း ကျွန်မအတွက် အရင်းနှီးဆုံး သူစိမ်းတစ်ယောက် ...
35.4K 3.8K 10
"ဘာဖြစ်​လို့ Gloomy Sunday သီချင်းဟာ အမြဲ​ချောက်​ခြားစရာ​ကောင်း​နေတာလဲ ? " " အ​ဖြေက ...ဘာဖြစ်​လို့လဲဆို​တော့ Mona Lisa က အမြဲတမ်းပြုံး​နေလို့​ပေါ့ " Mona Lisa က ငို​နေတာပါ ..... ဟုတ်​တယ်​ ....Mona Lisa က ငို​နေတာ .... ကိုယ့်​ဘဝရဲ့ ၁၀၀ရာခိုင်​နှုန်းမှာ ကိုယ်​တကယ်​သိတာ ၉၀ရာခိုင်​နှုန်းပဲရှိတယ်​ ....။ ကျန်​တဲ့ ၁၀ရာခ...
Can't Spell L.O.V.E Without L (Completed)
30.1K 2.9K 20
35.3K 4.2K 13
(ဖြစ်ရပ်မှန် ) ရှင်သန်နေသ၍တော့ ကျွန်တော်တို့ ရှေ့ဆက် နေရအုန်းမှာပါပဲ ..... အိပ်မက်တွေ ဟာ အဆုံးအစမဲ့ တဲ့ ခရီးရှည်ကြီး တစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ .... ။ Fic :Dream Traveller Author : Crystal Miyo Genre : Documentary Licsense : CC Non- com: no -derivs My last bride ဖန်တီးသူ ဟာ အခုချိန်မှာနောက်ထပ်ဖြစ်ရပ်...
My Last Bride
86.7K 9K 13
My Last Bride (​နောက်​ဆုံးသတို့သမီး) ကမ္ဘာ​ပေါ်မှာ တရားမဝင်​​သော ချစ်​ခြင်းများစွာ ကို ဂုဏ်​ပြု​​ပေးကြပါလျက်​နဲ့.... ဘာဖြစ်​လို့များ ကျွန်​မတို့ နှစ်​​ယောက်​ကြားက ချစ်​ခြင်းကို လက်​မခံနိုင်​ကြရတာလဲ ? ရှင်​တို့ရဲ့ အချစ်​အဘိဓာန်​မှာ သက်​ရှိနဲ့ သက်​မဲ့ ရယ်​လို့ ခွဲခြားထားတာလား ? ကျွန်​မတို့ရဲ့ အချစ်​ဇာတ်​လမ်းမှာ​တော့...
If I Have A Chance To Love You (Completed)
73.9K 6.3K 31
ရူးမိုက်​ခဲ့ဖူး၏။ ငို​ကြွေးခဲ့ဖူး၏။ နာကျည်းခဲ့ဖူး၏။ သို့သော် ကျွန်​မ သူ့ကို သိပ်​ချစ်​၏။
3.6K 479 5
My Heart And I Have Decided To End IT All ... Dreaming ... I Was Only Dreaming ... I Awake And I Find You Asleep In The Deep Of My Heart ...... •-• Short Story •-• •-• Story Line by Religiosa •-•
7.6K 601 1
Dj *( fanfic)* of Kuroko no basket anime^ ^ pair>>>>> Aomine × Kise My fav: pair in KnB ! I love them very much^ ^ Enjoy~
458K 39.7K 46
Follow By The Wind~
88.5K 10.9K 19
Touji isawriter who worte thriller but he dosen't believe ghost! One day he receive the latter form his granpa , and than the mistery begin~ This story is my own story ! Please enjoy^ ^ ~
161K 18.6K 21
♣အနာဂတ်​ကို ဖန်​တီးယူခဲ့တာမဟု​တ်​ပါဘူး....ကြိုတွက်​ချက်​ကြည့်​မိရုံပါ♣ ♠မ​သေချာတဲ့ အရာ​တွေ အ​ကောင်​အထည်​​ဖော်​လို့မရတဲ့ အရာ​တွေ လက်​​တွေ့မဆန်​တာ​တွေကို မယုံကြည်​ဘူး! အကွက်​ဆင်​ လှည့်​စားတာမျိုး .....ကိုယ်​မုန်းတယ်​♠ The story between the wizard and realistic ! This is my own creation story ! Please enjoy >З<